प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन १८ प्रतिशत वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन १८ प्रतिशत वृद्धि
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन १८ प्रतिशत वृद्धि
फागुन ३, काडमाडौं (अस) । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा बीमा शुल्क आर्जन १८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा रू. ६५ करोड ३९ लाख रहेको बीमा शुल्क दोस्रो त्रैमासमा रू. ७७ करोड ४८ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीको नाफा गत आवको तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेर रू. ५ करोड ४१ लाख पुगेको छ । कम्पनीको कुल दाबी भुक्तानी रकम गत आवको तुलनामा ६८ प्रतिशतले बढेर रू. ८५ करोड २६ लाख पुगेको छभने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम घटेर रू. १ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।
कम्पनीले हालै ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपीओ विक्री खुला गरी वितरण गरेको छ । एफपिओ वितरणको रकम प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको छैन । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४४ करोड ८५ लाख रहेको छभने एफपिओ वितरणपछि पूँजी रू. ५१ करोड ४४ लाख ६० हजार ३ सय पुगेको छ । जगेडा कोषको रकम रू. २० करोड ३८ लाख रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. २४ दशमलव १२ रहेको छ ।